Tianhe-2 supercomputer ine simba kwazvo pasirese yakavakirwa paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Tianhe-2 (inonziwo Milky Way-2) komputa huru inogadzirwa neNational University of Defense Technology yeChina (NUDT). Iyo supercomputer inogara muNational Supercomputing Center kuGuangzho, People's Republic of China. Parizvino ine kuburitswa kwe33,86 PFLOPS, iine mukana wekuwedzera kusvika ku54,9 PFLOPS, mune mamwe mazwi, pari zvino inogona kuita 33.860.000.000.000.000 yenzvimbo dzinoyerera dzepasekondi.
Ehe hongu, munhu wese anoziva kuti zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana ezvemakomputa makuru pane akanyorwa Top500 Ivo vanoshandisa Linux-based anoshanda masystem. Pano Linux haina kufananidzwa uye iri nekuda kwekuchinjika kwayo uye kugona, izvo zvinoita kuti ive yakakwana kune aya mabasa. Kunyanya Tianhe-2 inoshandisa iyo inoshanda sisitimu linux linux, yatakatokuudza nezvayo pane ino blog. Iyo yekuparadzira Ubuntu yakashandurwa uye yakashandurwa kuChina Chaizvoizvo Kylin Pakutanga yaive yakavakirwa paFreeBSD, asi vhezheni yakatsigirwa paLinux yakazobuda.
Tianhe-2's Kylin Linux inofanirwa kutsungirira uye kubata neye enable hardware. Pakutanga iyo ine 32.000 Intel Xeon microprocessors E5-2692 (yakavakirwa paIvyBridge microarchitecture) ine gumi nemaviri cores imwe neimwe. Aya machipisi anofambidzana ne12 Intel Xeon Phi 48.000S31P maprocessor uye 1 TiB ye RAM (chiuru chinoshandiswa kuCPU uye chasara chevashandisi). Nezve kuchengetwa uye kudyiwa, Tianhe-1.375 ine 2 PB yekuchengetedza masimba uye kunwa kwe12.4 MW. Midziyo yese inobata anenge mazana matanhatu emamirimita uye yaenda kuhurumende kweanosvika mazana matatu emamiriyoni emauro.
Mamwe mashoko - Ubuntu Kylin iyo Chinese Linux
Kunobva - Top500
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Tianhe-2: komputa ine simba kwazvo pasirese inoshandisa Linux
Sebastian Ibarra Tessini akadaro
Kana iyi super-komputa ikashandisa Windows ingadai isina simba kudarika yangu laptop yemwana wangu. XD
Pindura Sebastian Ibarra Tessini
Fernando Salcedo Beltran akadaro
Mhinduro senge iya inoti: "Kana iri super-komputa yakashandiswa ... zvinhu zvevacheche, kana kusagadzikana kwemumwe munhu anoda kuramba achizvibata semwana mudiki, iye asisiri mwana, sezvo ataura kuti ane mwanakomana. Ini ndinonzwira tsitsi mwanakomana weuyu "muchinda", nekuti ana baba vanogona kugara mune imwe nyika, kana vakaremara.
Pindura kuna Fernando Salcedo Beltràn
Uye iwe unganyanya kunonoka kumudaira.
Hacklat Latin mutengesi akadaro
Ini ndinoishandisa kweanopfuura makore gumi ABUNTU KYLIN 10 Inoshamisa inomhanya mune imwe nguva pamwe uye dhizaini yayo uye zvimwe zviri pamusoro mutungamiriri mukumhanyisa uye kuchengetedza Theanne 18.04-2 PetasFloaps
Pindura kuna Hacklat Latin hacker